Qr Code စတစ်ကာ
Qr Code စတစ်ကာ နေရာတိုင်းသင်၏ကားရောင်းရန်နည်းလမ်းသစ်! သင်၏ကားကိုရောင်းရန်တင်ထားသော www.krungsriautomarketplace.com တွင်သာသင်၏သင်၏ကားစာရင်း၏ထူးခြားသောဝက်ဘ်လိပ်စာပေါ် မူတည်၍ သင်၏ QR Code Sticker ကိုထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မည်။ သင်၏ရွေးချယ်ထားသည့်စတစ်ကာဒီဇိုင်းဖြင့်သင်၏ကားထဲသို့စတစ်ကာကပ်နိုင်သည်။ !! ၀ ယ်သူအတွက်အရောင်းဌာန၊ စတိုးဆိုင်များ၊ ကော်ဖီဆိုင်များ၊ အဆောက်အ ဦး များနှင့်စသည်တို့တွင်ရောင်းသူ၏ကားရပ်နားရာနေရာတွင်တွေ့ရသည့် QR Code ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရုံသာကားအသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုချက်ချင်းရယူပါ။ ရောင်းသူကိုခေါ်။ စစ်ဆေးပါ။ အားလုံးသင်နှစ်ယောက်စလုံးရှိသည့်နေရာ၌ရုတ်တရက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် !!!
1x3 ကော်ဖီစားပွဲ စနေ ၂၇ နိုဝင်ဘာ
Decor Photoinstallation သောကြာ ၂၆ နိုဝင်ဘာ
Only Right Here ဓားကိုင်သူ ကြာသပတေး ၂၅ နိုဝင်ဘာ
Complexညျ့ရှုပ်ထွေးHospညျ့ ဒီဇိုင်းဖြစ်ရပ်များ၏အစီအစဉ်သည် Qr Code စတစ်ကာ ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးကိရိယာ အိတ်ဆောင် Ultrasonic အားနည်းချက်ကို Detector ဓာတ်ခွဲခန်းရေသန့်စင်ရေးစနစ်